सुरुवातीहरूको लागि परम युरोप ट्रेन यात्रा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > सुरुवातीहरूको लागि परम युरोप ट्रेन यात्रा
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 05/12/2020)
यहाँ जो कोही यूरोप बाहिरबाट आएका छन्? यदि म हुँ रूपमा तपाईंले सार्वजनिक ट्रान्जिट द्वारा baffled हुनुहुन्छ आफ्नो हात उठाउनु. निश्चित, न्यू योर्कको सबवे छ, र टोरन्टो मेट्रो चलाउँछ, तर ठूलो र ठूलो, संसार कारमा फस्छ. त्यसैले जब हामी एक फैंसी फ्रान्सेली baguette लागि पोखरी भर हप बनाउन फेला, कुरा अत्यास एक सानो प्राप्त गर्न सक्छन्. यो पहिलो-टाइमर लागि विशेष गरी साँचो हो, जो अक्सर कसरी रेल आफ्नो युरोप यात्रा व्यवस्थापन गर्न ठीक कुनै विचार, तिनीहरूले यात्रा गर्नुपर्छ जहाँ एक्लै गरौं.
चाहे यो युरोस्टार र बीचमा भिन्नता छ TGV ट्रेन नेटवर्क (टीवर्षाaजीकिनारा वीitesse) वा नेभिगेट गर्न कोशिस गर्दै सीट आरक्षण र उन्नत टिकटिंग, यो सबै एक बिट धेरै हुन सक्छ. म हुँ रूपमा नष्ट ती लागि, हामी सँगै तपाईं सिकारुहरूको लागि अल्टिमेट युरोप ट्रेन द्वारा यात्रा दिन सबै भन्दा राम्रो यात्रा भेला गर्नुभएको.
रेल परिवहन भएको इको-मैत्री मार्ग यात्रा हो. thलेख द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ छ एक ट्रेन सेव, सस्तो ट्रेन टिकटहरू विश्व मा वेबसाइट.
शुरुवातहरूको लागि युरोप ट्रेन यात्रा रोक्नुहोस् 1: लन्डन
त्यहाँ हामी यो यात्रामा पहिलो बिसौनी रूपमा लन्डन रोजेका कारण एक नम्बर हो, तर समग्र यो सिर्फ सबैभन्दा अर्थमा बनाउँछ. लन्डन, उत्तर अमेरिका उडानहरू देखि बारम्बार र सस्तो हो, यसको मतलव तपाईले फ्रान्कफर्ट वा अन्य युरोपेली हबमा उडानमा केही गम्भीर पैसा बचत गर्दै हुनुहुन्छ.
लन्डन एक विशाल हब छ र तपाईं फेला गर्न कुराहरू कुनै समस्या छ छौँ. यदि तपाईं ह्यारी पॉटर प्रशंसक हुनुहुन्छ, शहर पुस्तक र चलचित्र सन्दर्भहरु rife छ. यदि तपाईं थिएटरमा हुनुहुन्छ भने, सोहो ब्रोडवे मनोरन्जनको सबैभन्दा ठूलो घर हो, र तपाईं अक्सर छुट मा टिकट पाउन सक्नुहुन्छ.
तपाईं सजिलै सप्ताह यहाँ गतिविधिहरु थकित बिना खर्च गर्न सक्छन्, तर कम से कम, हामी चार दिन सिफारिस गर्दछौं. एक पटक तपाईं सार्न तयार हुनुहुन्छ, यसलाई आफ्नो अर्को गन्तव्य टाउको गर्न समय.
ट्रेन स्टप 2: पेरिस
तपाईले युरोपलाई हिर्काउन सक्नुहुन्न यसमा समय व्यतीत नगरी संसारको सबैभन्दा रोमान्टिक शहर. रोशनी को शहर अवश्य-स्टप छ, चाहे त्यो आफ्नो पहिलो वा आफ्नो दशौं यात्रा, र यात्री लागि luckily, को Eurostar रेल लन्डन बाट पेरिस गर्न लगभग हरेक घण्टा चल्छ. यात्रा एक सानो भन्दा लिन्छ2घण्टा र ट्रेन टिकट अग्रिम सस्तोमा बुक गर्न सकिन्छ.
हामी साथै यहाँ कम्तीमा चार दिन खर्च सिफारिस गर्छौँ, तर यदि तपाईंको छुट्टीको समय सीमित छ तपाइँ यसलाई दुईमा निचोल्न सक्नुहुन्छ.
शुरुवातहरूको लागि युरोप ट्रेन यात्रा रोक्नुहोस् 3: बार्सिलोना
यो अर्को स्टप रेल द्वारा एकदम यात्रा हो हुनत, तपाईं एक लाभ लिन सक्छ ताजा स्थिति कार यस तटीय शहरमा आइपुग्नु अघि तपाईंको स्नूज प्राप्त गर्न. गोथिक क्वार्टरको चारैतिर घुमाउनुहोस् र पार्क गुइलमा जानु अघि केही चकलेट-डुबाएर चोरसको मजा लिनुहोस्।.
बार्सिलोनाको एक उत्तम पक्ष भनेको स्पेन यसको उत्तरी छिमेकीहरूको तुलनामा धेरै सस्तो छ, ताकि तपाइँ तपाइँको लागि धेरै प्राप्त गर्नुहुनेछ पैसा यहाँ. हामी शहर अन्वेषण गर्न कम्तीमा दुई दिन यहाँ रहन सिफारिस गर्छौँ.
रोक 4: राम्रो Ville
यसको बोर्डवक लागि र धेरै काँस नजिकै प्रसिद्ध, राम्रो Ville तपाइँको यूरोप रेल यात्रा मा एक रोक्न लायक लायक छ. शहर नै फ्रान्स गरेको राजधानी रूपमा ठूलो रूपमा हुँदा, यसको स्थान धेरै योग्य दिन यात्राको नजिकै छ. पहिलो, यस क्यासिनो मा मोनाको टाउको र खो पाँच डलर. को फैंसी कार आनन्द र पालना सूत्र 1 संसारको-प्रसिद्ध दौड ट्रयाक मा मार्ग. अर्को, क्यान्सको लागि ट्रेन लिनुहोस् – तपाईं चाडको बेला त्यहाँ हुनुहुन्छ भने ठूलो सेलिब्रेटीहरू लागि आँखा बाहिर राख्न!
हामी कम्तिमा चार दिन यहाँ सिफारिस गर्दछौं ती सबै दिन यात्राको लागि ठाउँ बनाउनुहोस्.
शुरुवातहरूको लागि युरोप ट्रेन यात्रा रोक्नुहोस् 5: रोम
इटालियन राजधानी आँखा लागि भोज छ. स्पेनको चरण देखि गर्न Trevi छहरा, त्यहाँ लगभग कतै छैन तपाई द्वारा टाढा फ्याँकिएको छैन मनोरम वास्तुकला. कि पर्याप्त थिएन भने, खाना भन्दा slavering लायक छ. ताजा gelato र भैंसी mozzarella संग हस्तनिर्मित पास्ता vies को खेत देखि सीधा आएको छ.
इमान्दारीसँग धेरै पनि हुँदैन रोममा बिताउने समय, तर यदि तपाईं छोड्न पर्छ पाँच दिनको न्यूनतम पछि यो बनाउन.
रोक 6: भेनिस
म आफ्नो पहिलो यात्राको समयमा भेनिस उल्लेख छैन भने म remiss हुनेछ. म सबै भन्दा राम्रो अनुभव छ गर्नुभयो बेला (धेरै पर्यटकहरु), यो शहर अवश्य-डु छ. Gondolas र सार्वजनिक डु boats्गा बीच, तपाईं युरोपमा सबैभन्दा धेरै रोमान्टिक साइटहरूमा नहरहरूको पार आफ्नो बाटो पाउनुहुनेछ.
हामी सुझाव दिन्छौं कम्तिमा दुई दिन भेनिसमा तपाईंको अर्को गन्तव्यमा ट्रेन हप गर्नु अघि.
शुरुवातहरूको लागि युरोप ट्रेन यात्रा रोक्नुहोस् 7: भियना
यहाँ हामी सबै भन्दा यात्रा मार्ग छोडेर र बाटो बाहिर एक बिट शीर्षक हुनुहुन्छ. यो राम्रो कारणले हो, हुनत, बढी केन्द्र-स्थित युरोपेली देशहरूमा कहिल्यै बेवास्ता गर्नुपर्छ. यी केही हडताली मतभेद संग स्वाद र पश्चिम को फ्लेयर छ. भियना मा, यसको अर्थ रैगि। हो कफी संस्कृति र चट्टान तल्लो मूल्यहरु. के थप तपाईं चाहनुहुन्छ सक्छ?
हामी मा सार्ने अघि भियना कम्तीमा दुई दिन सिफारिस.
रोक 8: प्राग
यो हजार वर्ष पुरानो शहर यसको पुरानो शहरको लागि प्रसिद्ध छ. जब तपाईं जानुहोस्, को Astronomical घडी मा रोक्न शिशु येशूले हेर्न शीर्षक अघि भूल छैन. तपाईं इतिहास रुचि राख्नु हुन्छ भने, पुरानो यहूदी बस्ती अझै पनि बाध्य inhabitation को चिह्न भालु. आजकल क्षेत्र विस्तार जीर्णोद्धार गरिएको छ, जबकि, तपाईं अझै पनि यसको छ सभाघरहरूमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ.
शहरको खोजी गर्न हामी प्रागमा कम्तिमा तीन दिन बस्न सल्लाह दिन्छौं.
शुरुवातहरूको लागि युरोप ट्रेन यात्रा रोक्नुहोस् 9: बर्लिन
एक नियमको गर्न rebirth, आज बर्लिन हिप जर्मन संस्कृति को हब छ. चाहे तपाई हिपस्टर बार वा एक मा जान खोज्दै हुनुहुन्छ कला संग्रहालय राम्रो भोजन रेस्टुरेन्ट रूपमा लुकाएको, जहाँ हुन चाहनुहुन्छ बर्लिन छ. यहाँ के कुराहरू भार हो, को बर्लिन पर्खाल को remnants एउटा यात्रा सहित. को पाठ्यक्रम, त्यहाँ सबै परम्परागत संग्रहालयहरु र ग्यालरीमा साथै छन्.
हामी सबै बर्लिन प्रस्ताव छ आनंद कम्तीमा तीन दिन यहाँ सिफारिस.
रोक 10: एम्स्टर्डम
तपाईं भेनिस नहरहरुमा देखेका छौँ, तर केही पनि चिटिक्क लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, एम्स्टर्डम को व्यवस्थित शहर. डच राजधानी डुङ्गा बाइक भन्दा कार घर छ, र तपाईं सजिलै संग आफ्नो सबै समय वास्तुकला मा gawping यहाँ खर्च गर्न सक्छन्.
हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं एम्स्टर्डमको लागि यात्रा यहाँ कम्तिमा तीन दिन को लागी, तपाईं चार वा पाँच संग राम्रो चाहन्छु हुनत.
त्यहाँ तपाईँले छ. लन्डन बाट एम्स्टर्डम र सबैतिर बीच मा, यो युरोपेली रेल यात्रा शुरुआती लागि सबै भन्दा राम्रो पुस्तिका छ. एम्स्टर्डम मा, तपाईं प्रयोग गरेर लन्डन फर्कन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ एक ट्रेन सेव, नेदरल्यान्ड देखि वा टाउको घर दायाँ.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “सुरुवातीहरूको लागि परम युरोप ट्रेन यात्रा” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-trip-beginners%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
निम्न लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- यो लिंक अंग्रेजी मार्गहरू अवतरण पृष्ठ लागि हो, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, र तपाईं es fr वा tr मा र तपाईंको छनौटको अधिक भाषाहरूमा प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ.